အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: စောင်းလျားသီးငပိချက်နဲ့ မုန့်တီချဉ်စပ်သုပ်
17 Responses to “စောင်းလျားသီးငပိချက်နဲ့ မုန့်တီချဉ်စပ်သုပ်”
သွားရည်တောင်ကျတယ်. အစ်မချော. ဟိဟိ.စောင်းလျားသီးကိုငယ်ငယ်တုန်းက အပင်ကနေခူးပြီး ဒီအတိုင်းတို့တို့စားလို့ ၀မ်းတွေလျှောတာမှတ်မိသေးတယ်. ။ ဟိဟိ.။
မုန့်တီ သုတ် သိပ်ကြိုိက် တယ် .. . ဘယ်တော့ များ မှ အဲဒီ လို မြန်မာ အစား အစား ကောင်းကောင်း ပြန်စား ရ မလဲ စဉ်းစားနေတာ. ရန်ကုန် ပြန် တဲ့ စရိတ် ကို စဉ်းစားလိုက် ရင် ကိုယ် စား ချင် တာ ကို မျိုသိပ့် ထား လို့ ရ သွားတယ်။ ရန်ကုန် ပြန် တဲ့ စရိတ် က သွေးတိုး ချင် စရာ ကောင်းတယ်.. ..
အမြင် နဲ့ စား သွားတယ်..
မကြီးချောရေ နာမည်ကြားယုံနဲ့ သားရေတောင်ကျကုန်ပြီ ....စောင်းလျားသီးငပိချက်လေး လာငမ်းသွားပါတယ်...စာလို့မရတော့ ငမ်းတာပေါ့နော်....စားချင်လိုက်တာ.....ဟန်မဆောင်တော့ဘူး....ဟီး
အရင်တုန်းအိမ်မှာ ဇောင်းလျားသီးတွေ အများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် စားလို့မရသကဲ့သို့ အရေးမလုပ်ပဲ နေခဲ့မိတာ။ ခုမှ လုပ်စားကြည့်ချင်လာတယ်
ရိပ်သာမှာ နေ့ယောဂီဝင်ထားတာမို့ သွားခါနီး ချောရဲ့စားချင်စဖွယ်တွေကို အားပေးသွားတယ်။
အာာာ တခါလောက်တော့လူစုံရင် ချက်ကျွေးစမ်းဘာာ...မချောရယ် သွားရည်ကျလာပြီ
လက်စွမ်းပြ ဟွင်းး ဗိုက်ဆာတယ်
စားစရာတွေ မြင်ပြီး မစားရတာ စိတ်ညစ်လိုက်တာနော်..မုန့်တီသုပ်ရယ် ငပိချက်ရယ် နှစ်ခုပေါင်းပြီး ထမင်းပူပူလေး နဲ့ စားလိုက်လို့ ကတော့..အတွေးနဲ့တင် သွားရေကျလောက်တယ်
မုန့်တီကို အဲလိုသုပ်စားလို့လည်းရတယ်လား....လုပ်ကြည့်ဦးမယ်။း)
ကြည့်ရတာ သရေကျလိုက်တာနော်.. ဟင့်
မုန့်တီသုပ်လေးကြည့်ပြီး တော်တော်သရေကျသွားတာ...။ ငပိချက်လေးလဲကြိုက်တယ်....။ ဟင့် မစားရ မြင်သာမြင်ရ..။
စောင်းခါးသီးကိုတော့ စားနေမကျလို့ သိပ်မကြိုက်ဖူး
သွားကျိန်းလိုက်တာ ဒေါ်ချောရယ်...ပုံကြည့်နေရင်းနဲ့ကို ကျိန်းလိုက်လာတာ...အချဉ်နဲ့ ဦးဟန်ကြည်နဲ့ သဟဇာတမဖြစ်လို့ ဒီတနင်္ဂနွေစားဖွယ်ကိုတော့ ဝေရာမဏိလုပ်လိုက်ပြီ...